Wal-dhabdee Mooyyaleetti uumameen namoonni 19 ajjeefamanii, 100 ol ammoo madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Wal-dhabdee Mooyyaleetti uumameen namoonni 19 ajjeefamanii, 100 ol ammoo madaa'an
Rakkoo nageenyaa magaalaa Mooyyalee keessatti Sambata darbee eegalee guyyoota afurii oliif itti fufee jiruun yoo xiqqaate namoonni 19 yoo ajjeefaman 100 ol madaa'aniiru jedhu aanga'oonni.
Jiraattonni dubbisne akka nutti himanitti rakkoon kun waraana hidhattoota Oromoofi Somaalee gidduutti adeemaa jiruun dhalate.
Waraanni dilbata darbe eegale kun hanga har'aatti itti fufuun, hidhattoonni gama lamaaniin jiran gandoota magaalattii adda addaa keessatti walitti dhukaasaa jiru.
'Rakkoo daangaa Oromiyaafi Somaaleen waggaatti namoonni 700 ol ajjeefaman'
Namoota ajjeefaman keessaa 6 gama Oromoo irraa ajjeefamuu BBC'tti kan himan hogganaan waajira fayyaa Aanaa Mooyyalee Obbo Boruu Huqqaa, namoonni 72 ammoo madaa'anii yaala argataa jiru jedhan.
Akka Obbo Boruun jedhanitti rakkoon kun kan dhalate erga waraanni Liyyuu Poolisii naannoo Somaalee daangaa baballifannaaf jecha lafa daangaa Oromiyaa keessa jiru weeraranii booda.
Magaalaa Mooyyalee naannoo Qabbanaa jedhamutti, keellaa fayyaa tokkoofi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Mooyyalee irraas daree lama gubanii kan jedhan hogganaan kun, buufata poolisiifi waajjira bulchiinsa aanaa gubuuf yaalaa jiru jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa erga namni irraa madaa'ee booda gidduu bahe kan jedhan Obbo Boruun, humna qabnuun ofirraa ittisaa jirra jedhan.
Gama kaaniin qondaalli nageenyaa Naannoo Somaalee Obboo Shanoo Godanoo BBC'tti akka himanitti, ka'umsi waraana kanaa hidhattoonni Oromoo gandoota daangaa naannoo Somaalee jala jiran sadi weeraranii alaabaa naannoo Oromiyaa dhaabuu isaaniiti.
Kanaanis gama Somaalee irraa namootni 13 ajjeefamuu fi 30 madaa'uu Obbo Shanoon himaniiru.
Mootummaan Federaalaa gidduu galee dhimmicha ilaaluu hin dandeenye kan jedhan hogganaan waajjira ODP Aanaa Mooyyalee Obbo Alii Xachee, gara naannoo Oromiyaatti iyyannus 'kallattiin ni kaa'ama,' jechuun alatti homaa hin agarre jedhan.
Walitti bu'iinsi daangaa Mooyyalee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas kan Itoophiyaa keessaa Oromoo fi Somaalee gidduu walitti ida'amuun lubbuu namoota hedduu galaafateera.
Kanumaanis namootni hedduun iddoo jireenyasaanii irraa buqqa'aniiru. Qabeenyi manca'es muummee hin qabu.
Lakkoofsi namoota Mooyaaleetti ajjeefamanii 10 gahe
12 Bitooteessa 2018